Vakawanda Vakwegura Votambura Sevasina Kutumbura
Vakwegura vari pane mumwe musha unogara vakwegura, June 16, 2014. (Roopa Gogineni/VOA)
Vakuru vanoti “chirere chigokurerawo,” kududza kuti pakukura kwemwana vabereki vanoedza napose pavanogona kuti vape vana vavo hupenyu hwakatambanuka.
Asi zvinosuwisa kana tichitarisa mararamiro anoita vakwegura, tinoona kuti vakawanda vacho vanorarama mazuva avo ekupedzisira vazere nekunyunyuta zvichibva mukusachengetwa zvakanaka nevana vavo.
Vakwegura ava vanozvidya moyo kana vana vavo vekubereka vasingatsike paruvanze.
Mbuya Siphelile Nyathi Zanza veku Inyathi vane makore makumi masere nemasere ekuberekwa. Ambuya Zanza, avo vakabereka vana vasere, vatatu vapenyu pari nhasi, vanoti vakawanda vezera ravo havasisina vanovacheuka.
“Unenge watarisana nedambudziko nekuti kana wave wega zvinonetsa, hausisina waunotaura naye, hausisina waunotuma, hausisina waunoti chii, aiwa. Dambudziko unenge wanaro, kuti zvino ndinotaura nani, kana chokudya unoshaya kuti unodya nani. Ndodambudziko riripo iroro, nekuti kana une vana vako unenge uchiti iwe nhingi ita chakati, iwe nhingi wazodii. Ndozvatinoita kana une vana vako. Zvino kana wave wega so unenge wakasurukirwa nguva yacho.”
Mbuya Ndakaziva Muzuva Chingwa vanogara mumusha wekwaMambanje kuHwedza vane makore makumi mapfumbamwe nematatu ekuberekwa. Vanoti vakwegura vakawanda vanobatwa nezvirwere zvakaita sezvemoyo kana zveshuga nepamusana pekudzamisa pfungwa pavanofirwa nevarume kana vana. Vanoti zvinotoda kushinga.
“Zvinotinyaradza kana wafirwa nemwana wako vanhu vanoti haasi kuchema, asi mwana uyu anga asingamudi here? Ndinenge ndichimuda. Kana ndikachema sei, kana ndikarara nenzara haachadzoka. Wotarisawo mukati menyika, mumwe haasisina nemwana wese. Saka unozvinyaradza wega nekuronga kuti kwanhingiwo, kwanhingiwo, ko ini ndini ndaizoguma nepapi. Oona kuti kana neniwo futi ndichaenda, ndonzira yedu, hapana munhu anobhururuka kana anorarama ari pano pasi. Munhu kufa achifusirwa muvhu. Zvinongonzi atanga, atanga, kana ani zvake achateera kufusirwa muvhu.”
Mukoma waAmbuya Chingwa, VaManeto, vane makore makumi mapfumbamwe nematanhatu ekuberekwa. Vanogarawo zvekare mumusha wekwa Mambanje. Vanoti vanakomana vakawanda vanosara panofa vamwe vana, vanomedzwa nedhorobha, vokanganwa vabereki.
“Pfungwa dzinenge dzakunetsekanaka kugara wega. Hausisina tuzukuru, twatwechikoro hausisina wekugara naye. Unofunga, izvo zverufu unofunga kuti ko, icho chakamboita kuti vana vangu vapere chii? Kungozvisimbaradza ndezvekuti nhamo iyi haisi yemumwechete, takawanda. Zvinoita, zvinoshanya, mumwe musi ukagumburwa nemwana unoti dai baba vacho varipo vaimbodaro here? Unosvika ipapo.”
Ambuya Erina Mangava, vane makore makumi mapfumbamwe neanoraudzira, vakapunzika vakakuvara zvekuti havachagona kufamba. Vanoti hutungamiri hwemisha kana matunhu huri kukundikana kutsvagira vakwegura vakawanda vari kusemwa nevana vavo zvekushandisa zvakaita sema wheel-chair.
“Ndinoremerwa chaizvo nekuti kutsime handichagona, kuhuni handichagona asi kudya ndiri member chaiyo. Kana kubika ndinogona. Manje kuti ndichiita izvozvo zvekuti kutsvaga huni nekuenda kutsime ndizvo zvandiomera. Zvekuti kana zuva iroro ndichifunga handikotsire. Ndinofunga zvekare kuti dai VaMangava vari vapenyu vachikarira vana vavo.”
Ambuya Mangava vanoriritirwa nemwana wavo Media ane makore Makumi matanhatu nemanomwe. Muzvare Media vanoti vana vese vanofanira kubatsirana kuchengeta vabereki, kwete kuregererana.
“Mubereki anoita pfungwa dzakawanda, uye ndidzo pfungwa dzinovanetsa kuti mhuri yavo havasi kuiona. Imhuri yavo yakangoti tetere, vakauya gore rakapera muna April vachitanga kurwara, kusvika izvozvi havasati. Saka zvinovanetsa mupfungwa kuti “nhai vari kupiko vakomana ava, ndoti variko amai mari ndiyo iri kuvanetsa zvikanzi, “ko kungouya?” Ini ndinoti dai kuri kunzi kungouya sekuda kwavanoita ivo vana vavo kuti mwana akauya sekusvika kwamaita uku okurukura nemubereki vanorerukirwa kufunga. Nekuti dzimwe dzenguva unotoona kuti amai ava pane zvavari kufunga. Voti vamwe vanouya sei, oona izvozvo zvinovawedzera nyama yavo kurwadza.”
Baba Phirimoni Kambarami avo vane makore makumi matanhatu nemaviri, inyanzvi pakugadzira magetsi. Vanosevenzera imwe kambani huru muHarare. Vanoti kurasa mubereki kuzvikokera nhamo.
“Ngaticherechedze kuti anoraramisa ndimwari. Kuti ukatadza kunoona mai vako, iwe waita business, chipo chiya chamwari. Hauzoziva kuti kafiro kako kanozokunakirawo here nemararamiro ari kuita mai wavaka dumper, toti wato dumper. Because anogona kunge ari mai, baba akasofa kare kare. She is lonely. Mai akupihwa maskipper ezvema party ezvenyika iwe uri manager. Handizive kuti kuona kwamwari munozokuona sei? Mai anopuhwa nevamwe vana chikafu. Wepa next door anounza chikafu pamba pamai vako iwe uri manager. Handifungi kuti chiro chakanaka kana pamberi pamwari. Kana nemhuka dzinokuseka chaizvo kuti izvi zvazvinyi izvi. Asi chokwadi kana ari muporofita wako funga kairi. Mai vako ndimai vako. Hazvishamise futi kuti unofa mai auri kuti muroi achipo.”
VaKambarami vanoti mwana wese anowana makomborero kubva kune vakamubereka.
“Hazvishamise kuti vabereki vedu vaitinamatira kuti dai ndazove nemwana, achinamata, achinamata vamwe vachirara kumasangano, mumwe achirara achichema kuti tizove nehupenyu. Asi tinokoneswa padiki diki tobva tavakanganwa. Asi chizivai kuti zvinopera nekuti panoperera munamato waamai vako kuti uwane zvinhu izvi zviro zvako zvese zvinopera. Wozodzoka usisina chinhu, wozodzoka wakusiririsa. Vamwe votaura kuti ingozi, vamwe vachiti pane zvaakaita, vamwe vachiti akauraya munhu asi pasina. Nyaya ndeyekuti munamato wangu handini ndakatanga newekuti ndivepo. Kune wainamata kuti ndinoda mwana anotarisika panyika, tavepo, takukanganwa.”
Baba Trainos Zhou inyanzvi munyaya yezvekuchengetedza mabhuku anoshandiswa mumatura emabhuku, kana kuti ma library. Vanoti wese munhu haafaniri kufurirwa nevedzisvondo dzemweya kuti mubereki wako anoshereketa.
“Anotaurirwa kuti amai varwara kuno,mhanya nekukasika. Anoti manje manje so ndinouya, asi nekufamba kwenguva mwana uya haauyi. Come pakuti amai vaye vazofa unoona akumhanya mhanya achitenga zvinyowani zvekuti vaende nazvo mubhokisi. Ko, pavakange vari vapenyu wakamhanya kudaro mumwe musi vaurawa ne BP yekusauya kwaunoita. Vanhu vozoona kuti wakutenga zvinyowani nhasi, ko vari vapenyu waidii kutenga, pamwe dai vasina kufa. Vanokonzeresa tisu vabereki tisingazivi kuti vabereki vanochengetwa sei kana vari vapenyu.”
Mai Blessing Mutobaya vari kuita zvidzidzo zve Health Management muHarare. Vanoti mubereki anofanira kumirwa naye munguva dzakaoma.
“Amai vangu vakarwara 2008 ne mental problem. Pfungwa dzakanga dzisingashandi, saka zvavakarwara kudaro vakapinda muchipatara ndobva vatanga kuteera, kuenda kunguva. Vaenda kunguva kudaro pakanga pasina anokwanisa kuvagezesa nekuti mai vavo ichembere. Asi iyeni ndini ndaivepo gore iroro kuti ndivagezese. Saka ndaitovatora ndovagezesa ndovapfekedza kuti vagare zvakanaka nekuti manesi akanga aripo akanga akukundikana kuita basa ravo.
"Mushure maizvozvo mai vangu vakaita zvakanaka ndokubva vazobvunza tave kumba kuti inga mazuva angu ekuenda kunguva adarika. Ndokubva pawana wehukama akavataurira kuti wakaenda munguva yawairwara. Vakabvunza kuti “ndiani akandichengete panguva iyoyo?” Zvikanzi iye mwana wako. Zvakavashungurudza, vakanetseka. Asi semubereki vakafunga kuti zvandakaitirwa nemwana wangu izvi zvinoshamisa vakanditengera gumbeze rekutenda kuti wakaita hako nekuti ibasa rakaoma.”
VaJohn Mokwetsi vanova Online Editor we Alpha Media Holdings vanoti vatapi venhau havafanire kuora mwoyo pakudzidzisa veruzhinji kukosha kwevabereki.
“Nyika mamiriro ayaita for the past 18 or more years, inyika iri mu mood ye politics. Zvinoshamisa, ukaisa vaChamisa pa page rekutanga bepa rinopera, ukaisa nyaya yekuti honai ma roads afa, bepa hariperi. Ndo problem yataita, yekuti vanhu zvinhu zviri kuva occupier zvakanyanyisa, inyaya idzodzo dzematongerwo enyika. Asi ukada kuzotarisawo zvekare mapepa emukati, kana dziri nyaya dzakareba dzinonzi ma feature dziya, vanhu vari kumbozama havo kuita. Asi chatingangopopotera ndechekuti dzichazouya ku page rekutanga rinhi.”
Zvinhu zvikaramba zvakadai dzidziso yekukosha kwevabereki ichipararira nenyika, vakawanda vachanzwisisa kukosha kwevakavatumbura.